Akụkọ - Otu esi ahazi nchakọ na ọkpọkọ?
Olee otú na-akwado na ipigide na trotul?
Nke mbụ, gia kwesịrị ịnọ na-anọpụ iche. Mgbe ịmalichara ụgbọ ala ahụ, kpoo njigide ahụ ruo n'isi, wee tinye gia ahụ n'ọnọdụ mbụ nke gia. Mgbe ahụ atọghe ipigide. Mgbe atọghe ipigide, jiri nwayọọ. Mgbe ị na-eche na ụgbọ ala ahụ na-ama jijiji ntakịrị na Mgbe ịmalite ịga n'ihu, jiri nwayọ gbanye mmanụ, ma n'otu oge ahụ, gaa n'ihu na-ahapụ njigide ahụ ruo mgbe a tọhapụrụ ya kpamkpam na ụgbọ ala ahụ na-amalite nke ọma. na-agbanwe
Mgbe anyị kwesiri itinye akwa akwa, anyị kwesiri ikwekọ ọsọ nke ihe achọrọ, mgbe ahụ anyị kwesịrị itinye ụfọdụ ntụgharị iji mee ka ọsọ ahụ rute ọsọ nke ihe achọrọ (dịka ọmụmaatụ, mgbe gear nọ na 5 gear, ọsọ ahụ kwesịrị iru elekere iri ise ma ọ bụ karịa). Ozugbo elu, anyị nwere ike ịbanye na njigide ahụ, tinye gia ahụ, wee hapụ ipigide ahụ (ọsọ ọsọ nwere ike ịba ụba), n'otu oge ahụ trotul ahụ na-eme ka ọ ghara ịsọ ọsọ ọsọ.
Kedu otu esi arụkọ ọrụ na njigide na ntụgharị mgbe ị na-adalata ma na-agbanwe?
Mgbe ị chọrọ ịkwatu ụgbọ elu, ị ga-ebu ụzọ belata ọsọ ahụ. Anyị na-ebu ụzọ kwụba na brekụ ka ọ kwụsịlata, jiri aka nri wee bulie osooso ahụ, bulie ụkwụ aka nri elu, mee ngwa ngwa na pọdglị ma jide gia ahụ na ngwa kwekọrọ. , Hapụ ipigide pedal ipigide, na mgbe ị na-ahapụ pedal ipigide, jiri nwayọ zọnye onye osooso na ụkwụ aka nri gị.
1. Ihe kpatara oku mbu bu na ejiri jide ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbe 1 gaa na 2 na-efu efu, ọ gaghị agbanyụ mgbe ị buliri ya elu, ọ ga-amalite ipigide mgbe 2 gaa na 3, yabụ ị ga-eweli ya nwayọ nwayọ mgbe ọ dị afọ 2.
Mgbe na-eweli na 2, gwuo egwu amụba nke trotul site n'ụzọ iji belata ọnụ ọgụgụ nke ụlọ, (ịgbanye mmanụ mgbe eweli ipigide) enweghị mmetụta. Ọ bụ mmalite dị nkịtị.
2. Ike nke akụrụngwa nke abụọ nwere ike ịrịgo n'okporo ụzọ ugwu, yana ọsọ ọsọ nwere ike ịchịkwa site na ịda mbà nke njigide na ngwa nke abụọ. (N'ihe banyere ọsọ ọsọ ọsọ-ọsọ). Ọ bụrụ na ọsọ U-ngwa dị ọsọ ma ọ bụ nwayọ, jiri gia 1 jikwaa ya.
3. Ọsọ dị ziri ezi ma ụgbọ ala agaghị akwụsị. Iji mee ka ihe dajụọ, belata njigide ahụ, ma mee ngwangwa, mee ka ome osooso. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ntụgharị 2 na-achịkwa ntụgharị.